MinerOS GNU / Linux - ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက် Operating System (MilagrOS) | Linux မှ
MinerOS GNU / Linux - ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက် Operating System (MilagrOS)
အခမဲ့ဆော့ဝဲများနှင့် GNU / Linux သို့နိုင်ငံတကာလက်လှမ်းမီသောဤကြီးကျယ်ကျယ်ပြန့်သောဘလော့ဂ်၏နိုင်ငံတကာနှင့်လက်လှမ်းမီသောဧည့်သည်များ၊ မင်္ဂလာပါ။ လများစွာကြာပြီးနောက်ဤနည်းဖြင့်ရေးသားခြင်းမရှိဘဲယနေ့ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်သိရှိထားသောအရာအားလုံးကိုပေါင်းစပ်ပေးသောအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအသစ်အကြောင်းထုတ်ဝေမှုကိုယနေ့ကျွန်ုပ်ထံယူဆောင်လာပါမည်။ GNU / Linux၊ အင်တာနက် (Webapps) နှင့် Digital Cryptocurrency Mining:
0.1 GNU / Linux Miners - ဒစ်ဂျစ်တယ် Cryptocurrency Mining အတွက် ၁၀၀% အဆင်သင့်လည်ပတ်သောစနစ်
1 MinerOS GNU / Linux ဆိုတာဘာလဲ။
1.1.1 အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် 11/07/2018 မှ updated
1.2 MilagrOS - တည်ငြိမ်သောပုံစံသစ်
1.2.1 အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် 30/07/2021 မှ updated
GNU / Linux Miners - ဒစ်ဂျစ်တယ် Cryptocurrency Mining အတွက် ၁၀၀% အဆင်သင့်လည်ပတ်သောစနစ်
MinerOS GNU / Linux ဆိုတာဘာလဲ။
ဒါဟာဖြစ်ပါသည် GNU / Linux Distro၎င်းသည်လက်ရှိတွင်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပြီး beta ဗားရှင်း (၀.၂) နှင့်ယခင်လှူဒါန်းမှု (စီမံကိန်းအတွက်ထည့်ဝင်မှု) တွင်ပါ ၀ င်သည်။ beta ကို 0.3.
သို့သော်၎င်းသည်ပထမဆုံးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းဖြစ်သော၎င်းကိုမျှော်လင့်ရသည် 1.0 ဗားရှင်း ၏ (Petro) GNU / Linux မိုင်းတွင်းလုပ်သားများ အဖြစ်အသုံးပြုနိုင်ပါသည် နေ့စဉ်သုံးခရိုင်ကအားလုံးကိုဆောင်တတ်၏ကတည်းက အိမ်နှင့်ရုံးအတွက်အခြေခံနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆော့ဝဲXFCE Environment (Light and Functional) + Plasma (Beautiful and Robust) ၏ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့် Ubuntu 18.04 (Modernity and high Compatibility) နှင့် MX Linux 17 တို့ကို DEBIAN (တည်ငြိမ်မှု၊ အိတ်ဆောင်နှင့်မြင့်မားသောစိတ်ကြိုက်) ကိုအခြေခံထားသည့်ဖွဲ့စည်းပုံတွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ ၎င်းသည်မည်သည့် PC (Personal Computer) ကိုမဆိုအလယ်အလတ်အဆင့်မြင့်သောစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်မည်သည့်ပြwithoutနာမှမရှိဘဲကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်မှု။
La 1.0 ဗားရှင်း de GNU / Linux မိုင်းတွင်းလုပ်သားများ အပေါ်အခြေခံပြီးလာလိမ့်မယ် Ubuntu ကို 18.04 ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်လိမ့်မည် 1 GB ကို ပေါင်း (4.3 GB ကို) က 0.3 ဗားရှင်း ကြောင့် ပိုပြီးဇာတိ applications များနှင့်အတူကိုယ်ပိုင် Plasma ပတ်ဝန်းကျင်သို့သော်၎င်းသည် RAM မှတ်ဥာဏ်ကိုလျော့နည်းစေပြီးခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 400MB နှင့် 640MB သို့ ၀ င်ပါသည်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်စက္ကန့် ၃၀ အတွင်းပျမ်းမျှအားဖြင့် login session manager (lightdm) ကိုအပြည့်အဝ boot လုပ်ပြီး 0.3 စက္ကန့်အတွင်းပျမ်းမျှအားပိတ်ထားသည်။ ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းဆော့ဖ်ဝဲ ၅ ခုနှင့်ပိုက်ဆံအိတ် ၆ ခုတပ်ဆင်ထားသည်။
Distro MinerOS GNU / Linux ဗားရှင်း ဒါဟာမှစတင်ရန်မျှော်လင့်နေသည် ၂၀၁၄ ပြီ ၈ ရက်၊သို့မဟုတ်၏တရားဝင်ထုတ်ဝေပြီးနောက် Ubuntu 18.04 ။ MinerOS GNU / Linux ၁.၀ ဆောင်ခဲ့ ဦး မည် သတ္တုတူးဖော်ရေးအစီအစဉ်များ Minergate, CGMiner, CPUMiner, Claymore နှင့် XMR-STAK-CPU ကိုလက်နက်၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက်၊ Jaxx၊ Magi ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် Trezor ဟာ့ဒ်ဝဲပိုက်ဆံအိတ်ထောက်လှမ်းခြင်းတို့ကိုပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် MinerOS GNU / Linux တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် “ Non-Privative” နှင့်“ 100%” Operating System Home, ရုံးနှင့် / သို့မဟုတ် Cryptocurrency Mining တွင်အသုံးပြုရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ PlayOnLinux နှင့် Steam ကိုထည့်သွင်းခြင်းအားဖြင့်စီးပွားဖြစ် Microsoft application များနှင့်လိုက်ဖက်သော Linux Gamer တစ်ခုသို့အလွယ်တကူပြောင်းနိုင်သည်။
အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် 11/07/2018 မှ updated
ဖြန့်ချိခဲ့သည် MinerOS ဗားရှင်း ၁.၁ နှင့်၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအပြီးသတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မဝေးတော့သောအနာဂတ်တွင်၎င်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ထားသည့်အရာအားလုံးကို MilagrOS ဟုခေါ်သော Distro အသစ်သို့ပြောင်းရွှေ့လိမ့်မည်။
MilagrOS - တည်ငြိမ်သောပုံစံသစ်
အရေးကြီးသတင်းအချက်အလက် 30/07/2021 မှ updated
ဇူလိုင်လ 2.019 ကတည်းက Distro MinerOS အဟောင်း ပေါ်အခြေခံကာ Ubuntu ကို 18.04ပိုမို၍ အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအားလုံးကို၎င်းသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည် အသစ် Distro MilagrOS, ပေါ်အခြေခံကာ MX ကို Linux 19.X, အလှည့်တွင်အခြေခံသည် DEBIAN 10.Xအကျိုးဆက်ဤအကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် Distro ပါ အတွက်သင့်လျော်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်း၎င်းတို့သည်တူညီသောတရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့သာသွားသင့်သည် Tic Tac စီမံကိန်း | ဖြူ.
"အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxသည် MX-Linux Distro ၏တရား ၀ င်မဟုတ်သော (Respin) ထုတ်ဝေမှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အလွန်နိမ့်ကျသောစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည်။ ၎င်းသည်အရင်းအမြစ်နိမ့်ကျသောကွန်ပျူတာများနှင့်အင်တာနက်ကွန်ယက်အလားအလာနှင့်အကန့်အသတ်ရှိသော GNU / Linux ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ရရှိပြီး (ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး) သွင်းပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုအင်တာနက်မလိုအပ်ဘဲထိထိရောက်ရောက်နှင့်ထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်သည်။ သင်လိုအပ်သမျှနှင့်အခြားအရာများကိုကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသည်။".
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပိုမိုမကြာသေးမီကသတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ပါတို့တွင်လည်းကြည့်နိုင်သည် link ကို.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » GNU / Linux များ » MinerOS GNU / Linux - ဒီဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းအတွက် Operating System (MilagrOS)
70 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
Manuel ARTURO SILVA ROCHA ဟုသူကပြောသည်
ဟေး ကောင်းသော post 🙂။
MANUEL ARTURO SILVA ROCHA သို့အကြောင်းပြန်ပါ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ငါသည်ငါ့ Distro အားလုံးကိုငါ့အသိပညာထားကြပြီ
၎င်းသည် distro အသစ်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏မေးခွန်းမှာဤ distro အသစ်သည် postgres, docker, postman, mysql စသဖြင့်ပရိုဂရမ်များတပ်ဆင်ခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသလားသို့မဟုတ်အိမ်ပရိုဂရမ်များ (အခမဲ့ရုံး) အတွက်သာလား။
သင်တန်း၏အမည်မသိ။ အခြေခံ GNU / Linux ပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့သည်။
« Distro MinerOS GNU / Linux ဗားရှင်း ၁.၀ ၏ကုဒ်အမည်သည်ပထမဆုံး Cryptocurrency သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလားသမ္မတနိုင်ငံ၏တရားဝင် Cryptoactive ၏ဂုဏ်အသရေအတွက်“ Petro” ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဆိုးလွန်းသည်၊ သင်သည် linux OS တွင်မူဝါဒ (နှင့်အကောင်းဆုံးမဟုတ်) ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။
နာမတော်ကိုနိုင်ငံရေးအဖြစ်ရှုမြင်ခြင်းကအမှန်ပင်သနားစရာဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း ၁.၂ ကို Onixcoin ဟုခေါ်သည်။ ၀.၃ ကို Bolivarcoin ဟုခေါ်လိမ့်မည်။ ပါတီသို့မဟုတ်အယူဝါဒမည်သို့ပင်ရှိစေကာမူ၊ အမျိုးသားပုဂ္ဂလိကကဏ္ or သို့မဟုတ်ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ (အစိုးရ) မှဖန်တီးထားသောအနာဂတ်ပုဂ္ဂလိကသို့မဟုတ်အစိုးရ Cryptocurrencies အဖြစ်အောက်ပါတို့ကိုခေါ်ပါမည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းကို Petro ဟုခေါ်ဆိုခြင်းမရှိသောနိုင်ငံရေးအတွက်မဟုတ်ဘဲ၎င်းကိုယုတ္တိဗေဒနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက် Petro ဟုခေါ်သည်။ အကယ်၍ Capriles, Machado, Mendoza သို့မဟုတ်အခြားနိုင်ငံ၏အတိုက်အခံတစ် ဦး သည် Crypto ဆွဲပါကအနာဂတ် 1.2.X အချို့ကိုထိုအရာဟုခေါ်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်သည်နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်နည်းပညာရှင်ပါ။
"ဗင်နီဇွဲလား" အမှတ်အသားနှင့်အတူဘာမှယုံကြည်စိတ်ချမဟုတ်ပါဘူး, cryptocurrency မဟုတ်တစ် linux ဖြန့်ဖြူးမဟုတ်ပါဘူး။ ဗင်နီဇွဲလားမှာဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကမ္ဘာကြီးသိတယ်။
စကားမစပ် ... နောက်ထပ် linux ဖြန့်ဖြူးမှုတစ်ခု ... အဲဒီ console ပေါ်က command နှစ်စုံနဲ့သင့် linux ဖြန့်ဖြူးမှုကိုရယူနိုင်ပါတယ်။ မိန့်ခွန်း။
စိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့်လေးစားဖွယ်ချဉ်းကပ်မှု! ငါနားလည်သဘောပေါက်လားကြည့်ကြရအောင် - ဗင်နီဇွဲလားနဲ့ဘာမှမပတ်သက်ဘူး၊ ဗင်နီဇွဲလားမှာလုပ်ထားတဲ့အရာကယုံကြည်စိတ်ချထိုက်တယ်မဟုတ်လား။ ငြင်းဆန်သောယူဆချက်တစ်ခုအရဤအရာသည်လုံးဝနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီသောကြောင့်သင်လုံးဝမှန်ကန်သည်ဟုဆိုပါစို့။ သို့သော်၎င်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားခြင်းဖြင့်သင်သည်လှပပြီးကြီးကျယ်သောဗင်နီဇွဲလားအခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ဘလော့ဂ်ကိုပိုင်ဆိုင်သည်နှင့်အမျှသင်ကိုယ်တိုင်ကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်ခြင်း၊ ငါသိသည်အတိုင်း, ဗင်နီဇွဲလားပြည်သူ့ (အားလုံး: အရာရှိများနှင့်အတိုက်အခံများ, ဆိုရှယ်လစ်များနှင့်အရင်းရှင်, ညာဘက်နှင့်လက်ဝဲဘက်) သည်အခြားလူများနှင့်အတူတူပင်, ကောင်းမကောင်းဖြစ်ကြသည်။ တိုတိုမှာ, ကျနော်တို့ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်အကြောင်းပြောဆိုသည့်အခါ။ မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ...
သူ့အလုပ်ကိုရှုတ်ချတဲ့အတွက်ကျွန်မမှတ်မိသေးတယ်။ သူဟာနာရီပေါင်းများစွာကုန်ဆုံးခဲ့ရမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသိတယ်၊ အချိန်ဟာငါတို့မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးအရာဖြစ်တယ်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအသိုင်းအဝိုင်းအတွက်မင်းရဲ့ထည့် ၀ င်မှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာပါဟိုဆေး၊ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မရဲ့ရည်ရွယ်ချက်က tirade တစ်ခုဖန်တီးဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ သင်တီထွင်သမျှသို့မဟုတ်တီထွင်သည့်မည်သည့်အရာအတွက်မဆိုသင်ရွေးချယ်သောအမည်များသည်နောက်ဆုံးတွင်သေချာသောသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံများသို့မဟုတ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေများကိုကိုးကားထားသော Linux အခြေပြုဖြန့်ကျက်မှုအကြောင်းကျွန်ုပ်အထူးမသိပါ။ ကျူးဘားတွင်ဖန်တီးခဲ့သောတည်ရှိပြီးအသစ်ဖြစ်သော Nova OS ပင်လျှင်ဗင်နီဇွဲလားရှိသဘာဝအမွေအနှစ်ကိုရည်ညွှန်းသော Canaima သို့မဟုတ် OS ၏ကမ္ဘာနှင့်မကိုက်ညီပါ။ ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်ပဲ။ အင်းငါသည်လည်းနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူး။ ငါက developer မဟုတ်ပေမယ့်လည်းငါကနည်းပညာရှင်ပါ။
Distro MinerOS ၏သော့အမည်များသည်ဗင်နီဇွဲလားတွင်ဖန်တီးထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်ဗင်နီဇွဲလား Distro ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပြည်နယ်သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိကဗင်နီဇွဲလား cryptocurrency ကိုသာရည်ညွှန်းလိမ့်မည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးအရဘာမှမမြင်ရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ခင်ဗျားရဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်၊ အဲဒါကတိုင်းပြည်တခုကစီမံကိန်းတစ်ခုဟာခင်ဗျားရဲ့ဖွင့်ပြထားတဲ့သတ်မှတ်ချက်အတွင်းမှာကျမယ်ဆိုရင်အဓိပ္ပာယ်ရှိတယ်။
Cloudbox, ငါ distro codename ဖော်ပြဖော်ပြ၏ "နိုင်ငံရေး" လှုပ်ရှားမှုမမြင်ရပါ။
မယုံနိုင်စရာစီမံကိန်း! ငါကစမ်းသပ်ဖို့ distro ကို download လုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီစီမံကိန်းကို Github လိုမျိုးစင်မြင့်တစ်ခုမှာထောက်ခံမှာလား။
တီထွင်မှုစီမံကိန်းအတွက်လှူဒါန်းပြီးနောက် ၀.၃ ကိုအခမဲ့ရရှိပြီး ၀.၃ ကိုဘလော့ဂ်တွင်ရရှိနိုင်သည်။
Alexander TorMar ဟုသူကပြောသည်
ဒီ distro Bitcoin သို့မဟုတ်မည်သည့် cryptocurrency သတ္တုတူးဖော်ရေးအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ကြလိမ့်မည်နည်း ကြိုတင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊
မည်သည့် cryptocurrency သည်ဤ GNU / Linux Distro တွင် Ubuntu / DEBIAN အခြေစိုက် Distros တွင်ဖြစ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံး၎င်းကိုသိမ်းယူနိုင်သည်။
ဒါဝင် Cabin ဟုသူကပြောသည်
ဗင်နီဇွဲလား၌မှတ်ပုံတင်ထားသည့် Blockchain နှင့် Cryptoactive ၌စတင်တည်ထောင်သောအတိုင်ပင်ခံကုမ္ပဏီ Cry & CA မှစီစန်သည်ဟိုဆေး၊ MinerOS ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုရန်နည်းလမ်းများအားဆွေးနွေးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ဆက်သွယ်ချင်ပါသည်။ အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ corpocrypto@gmail.com။ မင်္ဂလာပါနှင့်ပိုမိုအောင်မြင်မှုများ။
Darwin Cabin သို့ပြန်ကြားပါ
ငါ့သူငယ်ချင်းကငါ့ကိုအများကြီးခေါ်တယ်၊ အာရုံစိုက်တယ်၊ မင်းရဲ့ပရောဂျက်၊ ငါတကယ်တကယ်စိတ်ဝင်စားတယ်။ ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေအများကြီးလိုချင်တယ်။ မင်းမှာကြေးနန်းဆက်သွယ်ရေးလိုင်းရှိသလား၊ မင်းကစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေအများကြီးမေးနိူင်မလား။ ကြိုတင်မဲကျေးဇူးတင်ပါသည် .. နှင့် VENEZUELA တက်! ကျွန်ုပ်တို့၏လှပသောတိုင်းပြည်နှင့်စပ်လျဉ်း။ အဓိပ္ပါယ်မဲ့သောမှတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုပါ
ကြေးနန်း - @Linux_Post_Install
ထို့အပြင်၎င်းသည်ဗင်နီဇွဲလားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် ၀ မ်းသာပါသည် (၎င်းသည်ဗင်နီဇွဲလားကိုမေရှိယကိုစောင့်ဆိုင်းခြင်းမပြုဘဲမြေပြင်မှထုတ်ပေးမည့်တစ်ခုတည်းသောအရာ) ။
Petro ဆိုတာက code name တစ်ခုပဲ။ ကျွန်တော်သိသလောက်ကတော့ဘယ်သူ့မှမလုပ်နိုင်တာကိုငါသိတယ်။ ၎င်းတို့သည်၎င်းနှင့် ပတ်သက်၍ အငြင်းပွားစရာမဖြစ်သင့်သောကြောင့် cryptocurrency codenames များကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
သင်ပါဝင်သောသတ္တုတူးဖော်ရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုသင်အမည်ပေးသကဲ့သို့လူအများစုအတွက်ပိုမိုအမြင်အာရုံဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်ဖြစ်နိုင်သည့်မည်သည့် cryptocurrencies မှထိုနေရာမှမည်သည့်သတ္တုတွင်းကိုရရှိနိုင်ကြောင်းကိုလည်းသင်မှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။
PS: Bolivarcoin ဟာဟာသမဟုတ်ဘူး၊ တကယ့်အရာမဟုတ်ဘူး။
ရက်စွဲကိုကြည့်သည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ Bolivarcoin ဟုခေါ်သောပြည်နယ်မှမဟုတ်သော Cryptocurrency Community သည် Onixcoin ထက်အသက်ကြီးသည်။
မှတ်ချက်။ ။ အထူးသဖြင့် "XFCE + Plasma ပတ် ၀ န်းကျင်" ၏ပေါင်းစပ်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်အလွန်ထိမိခဲ့သည်။ ဒီပတ် ၀ န်းကျင်တွေကိုရောထွေးနိုင်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။
ကျွန်တော့်အရင်က XenOS လို့ခေါ်တဲ့လူစည်ကားပြီးဘယ်လောက်ထိများပြားလာတာလဲဆိုတာကိုတော့ DEBIAN Testing ကိုအခြေခံထားတာပါ။ သို့သော်၎င်းကို Systemback မှတစ်ဆင့်၎င်း၏တည်ငြိမ်အောင်ပြုလုပ်ရန်မစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်မဟုတ်ပါ၊ သို့သော် LiveCD တွင်၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းပြီး Virtualbox တွင်ထည့်သွင်းထားပြီးဖြစ်သည်။
သင်၏ဘလော့ဂ်၏တည်ကြည်သောနောက်လိုက်၊ အဲလ်ဘတ်နှင့်သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုနှုတ်ခွန်းဆက်သသည်။ အကယ်၍ သင်၌အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲသင်ကြားရေးအကယ်ဒမီမရှိပါကကျွန်ုပ်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်လိုပါက၊ နောင်အနာဂတ်တွင်ဤစီမံကိန်းကိုသင်ပိုမိုရယူနိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်အားတစ်ချိန်ကတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သင်နှင့်အတူ linux အတန်းများသင်ချင်သော၊ သီးသန့်အတန်းများအတွက်မလိုအပ်သောသူများသည်အလွန်ကောင်းမွန်သော cryptocurrency သင်တန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ငါမဆိုအကယ်ဒမီမှာသေးသင်ပေးကြဘူး။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့် Crypto-commerce နှင့်ပတ်သက်သည့်အိမ်တွင်းအကြံဥာဏ်များကိုကျွန်ုပ်ပေးနေပါသည်။ ငါသိသည်အတိုင်းငါဗင်နီဇွဲလား Caracas မှဖြစ်၏
သင်၏ဆောင်းပါး၌၎င်း၏မူကွဲတစ်ခုသည် လွတ်လပ်၍ အခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းသင်မှတ်ချက်ပေးသောကြောင့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရှာရမည်ကိုကျွန်ုပ်သိလို။ ၊ စနစ်တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုကိုပြန်လည်သုံးသပ်လိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ သူပြောတာကဒါပေမယ့်အခမဲ့ဖြန့်ဖြူးတဲ့ (GPL) ကိစ္စမှာဒီအချက်အလက်တွေရရှိဖို့အရေးကြီးတယ်၊ မမျှော်လင့်တဲ့ပေါက်ကြားတွေ (သို့) bridges တွေကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်ဂရုတစိုက်ပြင်ဆင်ထားရမယ့်ဆော့ဗ်ဝဲရှိတယ်။
အရင်းအမြစ်ကုဒ်သည် ISO နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည် ISO ကိုသင်ဒေါင်းလုပ်လုပ်သောအခါ၎င်းသည် unzip လုပ်နိုင်ပြီး၎င်း၏ configuration files တစ်ခုစီကိုတည်းဖြတ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါက DVD / USB Live format ဖြင့်၎င်းကိုဖွင့်ပြီးအသုံးပြုသူမှခွင့်မပြုသည့်မည်သည့်အလိုအလျှောက်အသွားအလာမျိုးရှိမရှိသိရန်အသွားအလာစစ်ဆေးမှုနှင့်စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်းသို့တင်ပါ။ MinerOS Distro မှရရှိသောနှစ်ခုကိုပေါင်းစည်းလိုက်သောကြောင့်၎င်း binaries ၏ source code သည် Ubuntu 18.04 နှင့် MX Linux 17 Distros တို့နှင့်တူညီသည်။ ၀.၂ ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်သင့်အားကျွန်ုပ်ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ ၎င်းကိုသင်စမ်းသပ်ပြီးမှတ်ချက်ပေးနိုင်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! ကောင်းပြီသတ္တုတွင်းလုပ်ငန်း၏အဓိကအတားအဆီးမှာစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Distro သည်ဤလုပ်ငန်းအတွက်ရည်စူးထားသောပစ္စည်းကိရိယာများ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုအချို့ကိုသက်သာစေသည်။
Ubuntu 18.04 ဖြစ်သောကြောင့် GNU / Linux အဆင့်တွင်ရှိသော Windows သည် Ubuntu သည်သဟဇာတဖြစ်ပြီးခေတ်မီသောကြောင့်၎င်းသည်၎င်းကိုထောက်ပံ့သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်။ အလွန်ကောင်းသော distro! ။ သင့်မှာ AnyDesk ကို install လုပ်ပြီးသားနှင့်အချို့သော configurations များရှိနေသည်ကိုငါကြည့်သည်။ ကျွန်တော့်မေးခွန်းကဗားရှင်း 0.2 (သို့) ၀.၃ ကထွက်လာတာနဲ့တစ်ပြိုင်နက် upgrade လုပ်လို့ရလား။ ရွှင်လန်းမှု…
MinerOS သည် Distro MX Linux 17 (Distro Mother) ကဲ့သို့သောမူလ installer မှတစ်ဆင့် MX Install သည် Distro ကိုနောက်ပိုင်းဗားရှင်းများသို့အဆင့်မြှင့်တင်ရန်ထောက်ပံ့သည်။ သို့သော်ဤကိစ္စတွင်အခြား Distro မှ ၀.၃ မှ ၁.၀ သို့အဆင့်မြှင့် တင်၍ မရပါ။ Mother (Ubuntu) သည်ဗားရှင်း ၁.၀ အတွက် ၁၇.၀၄ မှ ၃.၃ သို့ ၁၈.၀၄ သို့ပြောင်းသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အစကတည်းက MinerOS version 0.3 ကို install လုပ်ရန်လုံးဝအကြံပြုထားပါသည်။
ယခုသတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကို ၀.၃ သို့ ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုသူမည်သူမဆို version 0.3 အတွက် download link ကိုအခမဲ့ရလိမ့်မည်။ ၁.၀ အတွက်သတ်မှတ်သည့်ငွေပမာဏကိုလှူဒါန်းသူသည်ဗားရှင်း ၁.၁ နှင့် ၁.၂ အတွက်သတ်မှတ်ထားသောငွေပမာဏကိုအခမဲ့ရရှိမည်။
မှတ်ချက် - ဒါကငွေပေးချေမှုမဟုတ်ဘူး၊ GNU / Linux Distro အသစ်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အလှူငွေပဲ။ အားလုံးရဲ့အကျိုးအတွက်လုံးဝမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့နည်းနဲ့တည်ဆောက်ဖို့နာရီ / လုပ်အားများစွာယူပြီးဖြစ်သည်။
Walter Silveira ဟုသူကပြောသည်
သင့်ရဲ့အလှူငွေ Jose Albert, ဂုဏ်ယူပါတယ်။
Walter Silveira ကိုပြန်ပြောပါ
သင်၏ကောင်းသောဆန္ဒများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မကြာခင်မှာ Ubuntu 0.3 ကိုအခြေခံပြီးနောက်ဆုံးဖြစ်သော MinerOS GNU / Linux ဗားရှင်း 17.04 ကိုအခမဲ့ထုတ်ဝေတော့မည်။ Ubuntu 1.0 ကို အခြေခံ၍ ဗားရှင်း 18.04 ကိုလှူဒါန်းပြီးနောက် download ပြုလုပ်ရန်အဆင်သင့်ရှိပါ။ အခြေခံအားဖြင့် Ubuntu ဗားရှင်း၊ RAM သုံးစွဲမှုနည်းပြီး Wallets များပါ ၀ င်သော version ဖြစ်သည်။ စကားမစပ်, ယခုငါ Arepacoin ပိုက်ဆံအိတ်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့် Browsers အတွက် Webapps (Bookmarks Menu ကို) ကို update ။ 2Feb နဲ့ 20Mar မတိုင်ခင် Petro Mining Software အကြောင်းသတင်းမရှိဘူးဆိုရင်ငါ Wallet ကို online ဒါမှမဟုတ်သူတို့ဖြန့်ချိတဲ့ Software ကပဲပါ ၀ င်မှာဖြစ်ပြီး Version 20 ကိုforပြီလမှာ online တင်ပေးမှာပါ။ ၎င်းသည်တက္ကသိုလ်များနှင့်ကောလိပ်များ (သို့) ဖက်ဒရယ် Node များအတွက်အသုံးပြုရန်သို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်သတ္တုတွင်းတွင် ၀ င်ရောက်လိုသောသူများအတွက်သို့မဟုတ်၎င်းသည် Distro ကိုအသုံးပြုရန်အတွက်အသုံးပြုမည့်အခြားနေရာများတွင်အသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း Distro သည်အသုံးဝင်သောကြောင့်ဖြစ်သည် Format (DVD / USB) သည် Live (Live) သို့မဟုတ် install လုပ်သည်။ ၎င်းသည် Ubuntu အပါအ ၀ င်အခြား Distro များနှင့်မတူဘဲအသုံးပြုရန်လက်တွေ့ကျကျအဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ ၎င်းသည်နာရီ / လုပ်အားကိုချွေတာ။ သင်ယူမှုကိုကန့်သတ်သည်။ အမြတ်အစွန်းအတွက်! နောက်ဆုံးတော့လူတိုင်းကအဲဒါကိုနှစ်သက်ပြီးသူတို့လုပ်နိုင်တာကိုလှူဒါန်းနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ ဒါမှသာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာမှာပါ။
အထင်ကြီးစရာကောင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ဂူဂဲလ်စာဖတ်ချိန်မှနှစ်များတစ်လျှောက်လိုက်နာခဲ့သည့်ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်ဗင်နီဇွဲလားဖြစ်သည်၊ ကျွန်ုပ်အားအသိအမှတ်ပြုခြင်း၊ ၀ က်ဘ်၊ သက်ရှိထင်ရှား Linux နှင့်စားသုံးမှုနှင့်ဘဏ္financialာရေးကော်ပိုရေးရှင်းအားအားနည်းစေသည့်မည်သည့်လုပ်ဆောင်မှုအတွက်မဆိုကျွန်ုပ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
ဂုဏ်ယူပါတယ်! ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲနှင့်ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောစီးပွားရေးလောကအတွက်များစွာအထောက်အကူပြုသည်။ Monero ကိုဖြန့်ဝေခြင်းဖြင့်တူးဖော်နိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
မရရှိလျှင်ကြောင်းနှင့်အတူပြnoနာရှိသင့်ပါတယ်! ဤ Distro သို့မဟုတ်အခြားတစ်ခု၏အဆုံးစွန်သောရည်မှန်းချက်မှာ၎င်းတို့ကို Gamer Consoles (သူတို့၏သက်ဆိုင်ရာအထူးကောင်းမွန်သည့် kernel ဖြင့်) တွင်ထည့်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ သို့မှသာသင်အဆင်သင့်ရှိပြီးသား (တပ်ဆင် / စုဆောင်းထားသော) အရာအားလုံးနှင့်အတူ PS3 / PS4 သို့မဟုတ် Nintendo Switch မှသတ္တုတွင်းထဲသို့ run ရန်ဖြစ်သည်။ Nintendo Switch ပေါ်မှာ GNU / Linux ကို Plasma တပ်ပြီးစုစည်းခဲ့တဲ့ Hackers တချို့ရဲ့ဗွီဒီယိုထဲမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တွေ့ခဲ့ရသလိုပါပဲ။
၂၁ - ဖေဖော်ဝါရီ ၁၈ ရက် - Cpuminer-Opt Mining Software နှင့် NEM ​​Wallet ကိုနောင်လာမည့်ဗားရှင်း ၁.၀ တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ Webapps (Web Bookmarks) ကို update လုပ်ပြီး Petro နှင့်ပတ်သက်သောအသစ်သောသတင်းအချက်အလက်များလည်းပါဝင်သည်။ Ubuntu 21 (Bionic) ကို အခြေခံ၍ Operating System ၏အခြေစိုက်စခန်း (အက်ပလီကေးရှင်း) ကို ၂၂/၂၁/၁၈ အထိမွမ်းမံခဲ့သည်။
မတ် - ၁၈ ရက် - MinerOS အခြေစိုက်စခန်း Ubuntu 02 LTS "Bionic Beaver" သည်လာမည့် Ubuntu ၏ LTS ဗားရှင်းသည်အေးခဲနေသောအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အသစ်သောလုပ်ဆောင်မှုအသစ်များထပ်မံထည့်သွင်းထားခြင်းမရှိဟုဆိုလိုသည်။ စတင်ခြင်းနှင့်အလုပ်သည်လက်ရှိ bug များကိုပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားသော packets များ၏လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လွယ်ကူချောမွေ့စေခြင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ပါလိမ့်မည်။ ယခုအသစ် GNU / Linux MinerOS Base အသစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်အတူယခုကျွန်ုပ်တို့လည်း Kernel 18၊ Xorg ကို graphical server၊ Wayland graphical server၊ GNOME 18.04 Desktop နှင့် Nautilus ဖိုင်မန်နေဂျာကဲ့သို့သောအစုအဝေးများကဲ့သို့သောအရာများကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။ ၃.၂၆၊ Mozilla Firefox 4.15 နှင့်ပထမဆုံး LibreOffice 3.28 နမူနာ။ Ubuntu 3.26 နှင့် MinerOS 57.0.4 ကိုတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီAprilပြီလမတိုင်မီ Virtualbox 6.0.1.1 ကို Distro အတွင်းတွင်ထည့်သွင်း။ ထွက်ခွာနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သို့မှသာ Live DVD / USB format သို့မဟုတ်တပ်ဆင်ပြီးနောက်၎င်းသည် ISO ပုံရိပ်များကိုကိုင်တွယ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ကြိုးစားရန်တူညီသောသို့မဟုတ်အခြား Distros ။
Frank Silva သို့ပြန်သွားပါ
ယခုအချိန်တွင် MinerOS ကိုသွင်းပြီးသောအခါ AnyDesk (Access and Control Software) အတွက် sudo rm -f /home/$USER/.anydesk နှင့် / home / $ USER မှ .anydesk ဖိုင်တွဲ (လမ်းညွှန်) ကိုသင်ဖျက်ပစ်ရမည်။ Remote) သည်အသစ်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်၍ scratch မှ configure လုပ်နိုင်သည်၊ မဟုတ်လျှင် install လုပ်ထားသည့် GNU / Linux MinerOS တစ်ခုချင်းစီတွင်အသုံးပြုသူအမည်နှင့်စကားဝှက်တူလိမ့်မည်။ ၁.၀ ဖြန့်ချိသောဗားရှင်းတွင်ဤအရာသည်ပြင်ဆင်လိမ့်မည်။ ယခုအချိန်တွင်တစ်ခုတည်းသောသတင်းမှာ LibreOffice သည် DVD / USB format Live (Live) တွင်မသုံးသော်လည်း Distro ကိုတပ်ဆင်သောအခါအလွန်ကောင်းမွန်သည်။ ငါသည်လည်း Distro ၏အသုံးပြုမှုကိုချဲ့ထွင်ရန် Kodi ထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်!
ငါမှန်ကန်သော: sudo rm -rf /home/$USER/.anydesk
MinerOS GNU / Linux 1.0 - ပြီးပြီ။
ဂျိုးဇက်အဲလ်ဘတ်, ဒီ Distro ဖန်တီးမှုအတွက်သင့်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးဂုဏ်ပြုသင့်ပါတယ်။ ရပ်ရွာကိုသူ၏ကြီးမားသောအလှူငွေသည်သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိချေ။ ကောင်းပါပြီဂုဏ်ပြုပါတယ်ခံထိုက်။ ကျွန်ုပ်သည်သင့်အားမေးခွန်းအချို့မေးလိုပါသည်။ ၁။ သင်အကြံပြုသောလှူဒါန်းမှုပြုလုပ်ပြီးသည်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ကူးယူနိုင်မည်နည်း။ ၂ ။ ၃။ ၎င်းတွင် Claymore ၏ Dual Miner ပါဝင်ပါသလား။ 1. သင့်တွင်တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်ထည့်သွင်းခြင်းလမ်းညွှန်ရှိပါသလား။ မင်းရဲ့အဖြေတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြု၍ စာရေးပါ၊ ကျေးဇူးပြုပြီးဒီစီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာခင်ဗျားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ် !!
MinerOS GNU / Linux 1.0 သည်သတ္တုတူးဖော်ရေးအတွက်အသုံးပြုသောမတူကွဲပြားသည့် motherboards နှင့် GPUs များ၏ဒရိုင်ဘာများကိုမည်သို့ထောက်ခံသနည်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
၁- ဗားရှင်း ၀.၃ အတွက် ၀.၀၀၀1 BTC သို့ ၀ င်ပြီး၊ ၁.၀ ဗားရှင်း ၁.၀ အတွက် ၀.၃၀၀၃၀၀၀၀ သို့လှူဒါန်းပြီးနောက်၊ သင့်အားဂူဂဲလ်ဒရိုင်ဘာလင့်ကိုသင်ညွှန်ပြသည့်အီးမေးလ်သို့ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ ငါအလှူငွေများကိုလက်ခံရရှိရန် Eobot ပိုက်ဆံအိတ်ကိုအသုံးပြု!
2.- MinerOS GNU / Linux 1.0 သည် Minerate ပရိုဂရမ်များဖြစ်သော Minergate, CGMiner, CPUMiner (ဗားရှင်း: Multi and Opt)၊ Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 10.2) နှင့် XMR-STAK-CPU တို့ကိုယူဆောင်လာလိမ့်မည်။ Armory, Bolivarcoin, Exodus, Jaxx, Magi, Onixcoin ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ပုံမှန်အားဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည့် Trezor Hardware Wallet detection plugin
၃- ဟုတ်သည်။ Claymore (Dual ETH + DCR / SC / LBC / PASC GPU Miner 3)
၄.- သင်၌ဤဗွီဒီယိုတွင်တပ်ဆင်ထားသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာရှိသည် - https://proyectotictac.wordpress.com/2018/03/07/mineros-gnu-linux-1-0-ya-esta-lista/
5.- ကျွန်ုပ်သည်ဤအီးမေးလ်ဖြင့်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုခံယူနေပါသည်။ albertccs1976@gmail.com
Ing ။ Jose Albert သည်တုန့်ပြန်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အခြားမေးခွန်းများလား။ သင်၏ BTC လိပ်စာကဘာလဲ။ လှူဒါန်းခြင်းအတွက်အီးမေးလ်ဖြင့်ဆက်သွယ်ပါ။ Claymore's Dual Miner 11.2 ကိုသင်၏ Distro တွင်တပ်ဆင်။ ရနိုင်ပါပြီ။ ဒေါင်းလုပ်လင့်ခ်များသည် GOOGLE ဖြစ်ပါသည်။ https://drive.google.com/open?id=0B69wv2iqszefdFZUV2toUG5HdlU နှင့် Mega: https://mega.nz/#F!O4YA2JgD!n2b4iSHQDruEsYUvTQP5_w
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ် ဂုဏ်ယူပါတယ်
LTC လိပ်စာ: LgcK79zr7zoRP2HqfGrMvdWPKobcdWtqzE
BCH လိပ်စာ - 1QBVdzdQTmEzSc7PEcXmogiqCbbqC274iC
ဦး တည်ရာ Tag: 1286923
ZEC လိပ်စာ - t1eCN7qmsTQQiHgAbVNPYYgYFGPuvQGRUjr
ငွေပေးချေမှု ID: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000001286923
MAID လိပ်စာ - 15easGdbFy4TuwvsmVDwNYZukxRskGodJN
လှူဒါန်းပြီးပါကသက်ဆိုင်ရာ download link များနှင့်အီးမေးလ်ပြန်ပို့ရန်အတွက်လှူဒါန်းခဲ့သည့်အမည် (သို့) လှူဒါန်းသောနိုင်ငံ၊ နိုင်ငံအမည်နှင့်အမည်၊ albertccs1976@gmail.com အီးမေးလ်အကောင့်သို့အီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ရမည်။
ဟုတ်သည်။ သင်သည် Playonlinux သို့မဟုတ် Wine ကိုတပ်ဆင်ထားလျှင် Linux နှင့် Windows အတွက်မည်သည့် Mining ဆော့ဝဲလ်ကိုမဆို update သို့မဟုတ် / သို့မဟုတ်လက်တွေ့ထည့်နိုင်သည်။
စကားမစပ်ပြောရရင်နောက်ဆုံးမိနစ်မှာသူက LibreOffice ကမပေးနိုင်တာကို Distro ရဲ့ live mode မှာဖွင့်မယ်ဆိုရင် Spanish Suite မှာ Office Suite WPS Office ကိုလုံးဝထပ်ထည့်လိုက်တယ်။ ထို့အပြင်၎င်းတွင် KODI Multimedia Center လည်းရှိပြီး multimedia အကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး၎င်းတို့၏ ROM များကိုအတုခိုးခြင်းဖြင့် retro video game consoles များကိုပင်ကစားနိုင်သည့်ခလုတ်ရှိသည်။
MinerOS GNU / Linux 1.0 သည် Ubuntu repositories ဖြင့်အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်သည်။
MinerOS GNU / Linux 1.0 သည် AMD နှင့် NVIDIA Motherboards နှင့် GPUs များ၏ driver ကိုသတ္တုတူးဖော်ရေးတွင်မည်သို့အသုံးပြုသနည်း။
Ubuntu 18.04 LTS ကိုstableပြီလ ၂၆ ရက်နေ့တွင်၎င်း၏နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်သောဗားရှင်း၌ဖြန့်ချိလိမ့်မည်ဟုစဉ်းစားပြီးနောက်မှ MinerOS GNU / Linux 26 ကိုအသစ်ပြောင်းမည်လား။ ၎င်းသည် MinerOS GNU / Linux 1.0 ဖြစ် ဦး မလားသို့မဟုတ်၎င်းသည် ၁.၁ ကဲ့သို့သောဆပ်ဗားရှင်းရှိပါသလား။
MinerOS GNU / Linux 1.0 သည် Ubuntu 18.04 ကိုလွှတ်ပြီးရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ထွက်ပေါ်လာလိမ့်မည်၊ ထို့နောက် 1.1 နှင့် 1.2 ထွက်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
ဟုတ်တယ်။ Ubuntu နှင့် MX Linux 17 repositories ကိုတစ် ဦး တည်းဖြစ်စေအတူတကွသုံးပါ။ Support သည် Ubuntu နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။
Distro ကိုလှူဒါန်းလိုသူများအတွက် (သို့) Distro ကိုဝယ်ယူလိုသူများအတွက်ကျွန်ုပ်သည်ဤအလှူငွေများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ပိုက်ဆံအိတ်ဖြစ်သည်။
16-Mar-18: ယခုအချိန်အထိ7GNU / Linux 1.0 Mining Operating System များသည် Desktop နှင့် Mobile Computers များတွင်နေရာအနှံ့အပြားမှနည်းပညာဆိုင်ရာအင်္ဂါရပ်များ (Institutions and Homes) တွင်တပ်ဆင်ပြီး၎င်းတို့၏အုပ်ချုပ်မှုပိုင်းဆိုင်ရာအသုံးပြုမှု (ရုံးအလိုအလျောက်) အတွက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အိမ်များနှင့်ရုံးများအတွက်ယေဘုယျရည်ရွယ်ချက် Distro အဖြစ်။ ယခုအချိန်အထိအရာအားလုံးကျေနပ်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်ကွပ်မျက်ခံရသည်။
15-Mar-18: Petro ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်အတူနောက်ဆုံး ISO ။
14-Mar-18: စတင်ချိန်မှာပျမ်းမျှသုံးစွဲမှု ၀.၄ GB နဲ့ထုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာ Disk Space 4.5 GB နဲ့အတူ 0.4GB နဲ့ ISO ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများနှင့် applications ၃၇၀၀ ကျော်တပ်ဆင်ပြီးဖြစ်သည်။ ဗားရှင်း ၁.၁ နှင့် ၁.၂ ၏သတ်မှတ်ချက်များကိုသဘောတရားအရစတင်ခြင်းသည်အောက်ပါပြောင်းလဲမှုများကိုထည့်သွင်းရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
က) ဗားရှင်း 1.1: ISO 4.7 GB ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည် 8.4 GB Double Layer DVD သို့မဟုတ် 8 GB USB Storage Drive မှသာလျှင် executable ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းကို Playonlinux, Wine နှင့် Steam တို့ install လုပ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ Retro Game Console Emulators များလည်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မူလ Windows Applications များ၊ အထူးသဖြင့်ဂိမ်းများကို (လွယ်ကူစွာ) တပ်ဆင်ခြင်းကိုထောက်ပံ့ပေးလိမ့်မည်။
ခ) ဗားရှင်း ၁.၂ - ISO 1.2 GB ထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်၎င်းသည် 4.7 GB Double Layer DVD သို့မဟုတ် 8.4 GB USB Storage Unit မှသာလျှင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ MS Office 8 ကိုတပ်ဆင်ပြီးသားပါ။ GNU / Linux (MinerOS) ရှိ ၀ င်းဒိုးနှင့် MS Office အသုံးပြုသူများမှပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာ၊ တည်ငြိမ်စွာအသုံးပြုရန်။
မှတ်ချက် - MinerOS GNU / Linux 1.0 သည် 64Bit ဗိသုကာဖြစ်သော်လည်းဗားရှင်း 1.1 နှင့် 1.2 သည် multi-architecture ဖြစ်သည့် 32 and 64 Bit ဖြစ်သည်။ ယင်း၏အသုံးပြုမှုကိုပိုမိုကျယ်ပြန် universal များအတွက်!
Mar-13-18: Distro တွင်ပိုလျှံ (မလိုအပ်သော) application များကိုဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ISO (4.5GB) ၏လက်ရှိအရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ခြင်းမရှိဘဲပိုမိုအရေးကြီးသောအရာများကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အောက်ပါအချက်အလက်များကိုထပ်မံဖြည့်စွက်ခွင့်ပြုခဲ့သည် - Sun Java JDK 51.0.1 နှင့်အတူ install လုပ်ထားသော Java web plug-in (JRE) ကိုထောက်ပံ့သော Alternative Firefox (ဗားရှင်း ၅၁.၀.၁) ။ ဤအရာအလုံးစုံသည် Distro သည် Retro Console Emulated Games ကဲ့သို့သော Java နှင့်ဒေသတွင်းနှင့် web application များနှင့်ပရိုဂရမ်များကို run ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်သည်။ link များကျယ်ပြန့်သောစာရင်း (URL / Links) ကို Emulators, ROMs နှင့် Online Games and Retro Consoles တို့၏ download လုပ်ထားသောဆိုဒ်များသို့ webapps (Internet Browsers Bookmarks Menu) တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။
မတ် ၁၀-၁၈ ။ စိတ်ကြိုက် 10th Conky (Desktop Monitor) ကိုထပ်မံတိုးမြှင့်ပြီး 18st Conky သည်ထပ်တူအချက်အလက်များနှင့်ထပ်တူထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သည်။ နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်စတင်သောအခါ 5th Conky သည် graphical display ပြသနာများကိုပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
08-Mar-18: WPS Office ကိုစပိန်ဘာသာဖြင့်လုံးလုံးလျားလျားစပိန်ဘာသာနှင့်အတူထပ်ဆောင်း Office Suite အဖြစ်ထည့်သွင်းထားသည်။ မူရင်းအက္ခရာများပါ ၀ င်သည်။ LibreOffice ကို version 6.0.2.1 နှင့် Mozilla Firefox သို့မွမ်းမံခဲ့သည်။ version 58.0.2 ကြောင့် Distro ၏ ISO ပုံရိပ်သည် 4.5GB အထိတက်နိုင်သည်။
07-Mar-18: ယနေ့မှစ၍ MinerOS GNU / Linux 1.0 သည်မည်သို့တပ်ဆင်သည်၊ မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အညီ Distro ကိုအပြည့်အ ၀ သိရှိနိုင်ရန်အတွက် video tutorial အသစ်များသာပြုလုပ်လိမ့်မည်။ Ubuntu 18.04 သည်နောက်ဆုံးပေါ် MX Linux 17 နောက်ဆုံးသတင်းများနှင့်အတူထွက်ရှိလာသည့် MinerOS GNU / Linux 1.0 ၏နောက်ဆုံးဗားရှင်းနှင့် ISO ပုံသဏ္generateာန်ကိုထုတ်ဝေသည်။ ၎င်းသည် Satosh 10.000 လှူဒါန်းမှုဖြင့်အလှူရှင်များကိုအခမဲ့အနေဖြင့်အခမဲ့ရယူနိုင်သည် ( ၀.၃၀၀၀၀၀၀ BTC ဗားရှင်း ၀.၃ နှင့်အလှူရှင်အသစ်များအတွက် Satoshis ၃၀,၀၀၀ (၀.၀၀၀0.00010000 BTC) ကိုလှူဒါန်းခြင်းအားဖြင့်။
မတ်လ ၁၈ ရက် - မတ်လ ၁၈ ရက် - Kodi (Multimedia Center / Media Center) ကို Distro MinerOS GNU / Linux 06 တွင်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Multimedia အရင်းအမြစ်များကို (ရုပ်ရှင်၊ ဗွီဒီယို၊ တေးဂီတ၊ အသံ၊ ရုပ်ပုံများနှင့်အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်ဒေါင်းလုပ်ဆွဲထားသော) ကိုစီမံရန် Multimedia Center မှသို့မဟုတ် XFCE နှင့် Plasma Desktop Environments မှတိုက်ရိုက်သင်ဝင်ရောက်နိုင်သည်။ Retro Console ဂိမ်းများဖြစ်နိုင်သည် (Atari, SEGA, DreamCast) ။ ၎င်းသည် Intrcomp.net၊ SRP.nu, Fusion.tvaddons.co, Gamestarter နှင့် Zach Morris တို့၏ Repositories နှင့်အတူပါရှိသည်။ နှင့်အခြားသူများအကြား Internet Archive ROM Launcher add-ons (plugins) များ။ မည်သည့် Kodi Multimedia Center ကိုအသုံးပြုသည်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
Miguel Matos ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကောင်းပါတယ်၊ ငါပြောပြီးဒီ distro ရဲ့ live version ရှိတယ်၊ သို့သော်လည်းကျွန်ုပ်သည်အဘယ်ကြောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်စကားဝှက်ကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ကျွန်ုပ်ထည့်ရန်ထိုအချက်အလက်ကိုလက်မခံပါ။ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ဤကဲ့သို့သောလာမယ့်, သို့မဟုတ်ပါက disk ပုံရိပ်ကိရိယာတစ်ခုတပ်ဆင်ဗားရှင်းကနေအသုံးပြုခဲ့သည်နှင့်ငါစကားဝှက်ကိုအကြံပေးမခံခဲ့ရဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကြောင့်ခဲ့လျှင်ငါသိလို။
Miguel Matos အားပြန်ပြောပါ
Francis Esposito ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာပါဂျိုးဇက်၊ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုချီးကျူးပါတယ်။ ဘယ်ဟာ့ဒ်ဝဲလ်ကိုထောက်ခံသင့်သလဲ၊
Francisco Esposito ကိုပြန်သွားပါ
ယခုအချိန်တွင် graphical mine နှင့် console miners များသည် CPU မှအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်။ သို့သော်ဂရပ်ဖစ်ကဒ်တစ်ခုစီအတွက် Drivers ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် GPU မှပြproblemsနာမရှိဘဲမိုင်းတွင်းလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
မူကွဲ 0.2 - 0.3 - 1.0: အသုံးပြုသူ - sysadmin / လျှို့ဝှက်နံပါတ် - Sysadmin * 2018 *
Carlos escobar ဟုသူကပြောသည်
အရမ်းကြိုက်တယ်၊ မင်းလိုလူတွေ၊ စိတ်အားထက်သန်ပြီးအရာအားလုံးကိုဒေသအလိုက်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်။ မင်းကိုချီးကျူးလိုက်တယ် ငါကထည့်သွင်းခြင်းနှင့်သင်ကအကြောင်းရေးလိုက်ပါလိမ့်မယ်။
Carlos Escobar အားပြန်ပြောပါ
သင်၏ထင်မြင်ချက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။ ၎င်းကိုဒေသအလိုက်ဖြေရှင်းရန်အလွန်မှန်ကန်ပါကအခွင့်အလမ်းများ (အကျပ်အတည်း) ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးရယူပါ။
ယနေ့သင်သည် Beta 0.2, 0.3 နှင့် RC1 ဗားရှင်းများ၏ 1.0 ကိုအခမဲ့ download ရယူနိုင်သည်။ နှင့်ကြိုတင်လှူဒါန်းမှုဗားရှင်း 1.0 နောက်ဆုံးတည်ငြိမ်။
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ ကျွန်ုပ်သည်သင်၏ distro ကိုသီးသန့်အဖွဲ့နှင့်စမ်းသပ်ရန်လိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တွင်မေးခွန်းအချို့ရှိပါသည်၊ သင်နှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ကျွန်ုပ်ကိုအီးမေးလ်ပို့။ ရနိုင်ပါသလား။
Johan linares ဟုသူကပြောသည်
MintMe သတ္တုတူးဖော်ရေးပလက်ဖောင်းသည် Linux နှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြောင်းသင်သိပါသလား။ အထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်း ၁.၂ နဲ့ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေအထူးသဖြင့်။ ဤတွင်ကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ထားသောနောက်ဆုံးသတင်းများအားလုံးကိုပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သင့်အတွက် link ကိုထားခဲ့ပါ https://www.mintme.com/news/release-notes-v1-2
Johan Linares အားပြန်ပြောပါ